Karoora Muummicha (Master Plan) Finfinnee – Gubirmans Publishing
Posted on April 29, 2014 by bgutema
Finfinnee, lafa Oromoo, bakka jalqaba jaarraa 20ffaa dinni mandheessaa itt ijarachuun buphaa buuqqataa gomgomaa yaase itt buufate, ammas wiirtuu waldhabdee ta’ee hafaa jira. Karooramee, dhiisee, aangoo qaamaan haa ta’u safuun, yoo humna saamamtoota ijaaramanii hin ta’in, kan akka fedha saanii nama irratt hin feene abbaa hirrootaa dhaabu danda’u hin jiru. Oromoon Oromiyaa irratt abbaa biyyummaa gaafachuutt kan ka’e gaafa qabamee eegaleetu. Ergasii abbaa biyyummaa dhabe deebifachuuf nagaanis hidhannoonis gaafachuu hin dhaabne. Qabsoo bara hedduu fi wareegama guddaa booda, 1991 deebiin fakkeessaa kennamuu eegalaan. Hidhata yeroo Mootii Habashaa waliin gurguddoon Oromoo yawus uumuu yaalaniin akeeka bu’uuraa tokko tokko irratt walii galanii turan. Sunis yeroof “Mootummaa Cehumsaa” dhaabuu, sabooti mirga hiree ofii walabummaa ofiin murteefachuu akka qaban walii beekuu, daangaa Oromiyaa yeroof ulagaan murteessu beekamu, filmaata naannaa naannaatt gaggeessuu fi heera rakkina ijoo godinaa sanaaf furmaata kennuu danda’u waliin wuxinuu, Finfinneen magaalaa addatt fedhi Oromiyaa keessatt eegamuu qabu ta’uu fudhatamu ture. Mootummaan Cehumsaa yeroo raawwatu ummatooti gara fedhanitt cehuu akka muteeffatan amanameetu. Garuu akka abdatamett utuu hin ta’in olhantummaa gola tokkoon qari’uu dandahe. Egaa, gaaffiin Oromo biyya abbaa ofii irratt mo’ummaa qabachuu gana koloneeffataan bacancare jechuu dha.